Kooxda Atletico Madrid oo markaan weerar ku ah Arsenal… (Waa kee xiddiga muhiimka ah ee ay doonayso inay ka soo qaadato?) – Gool FM
Waa tee kooxda ugu cad-cad inay la saxiixato da’yarka Jude Bellingham? … (Man United, Man City mise Chelsea?)
Weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Sadio Mane oo rikoor taariikhi ah ka sameeyey horyaalka Premier League
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay bandhigga liita ee Jadon Sancho
Goolhaye Edouard Mendy oo sharraxay sirta ka dambeysa bandhiggiisa wacan ee Kooxda Chelsea
Horudhac: Valencia vs Real Madrid… (Dagaalka hoggaanka La Liga oo caawa ka dhici doona Mestalla)
Horudhac: Juventus vs AC Milan… (Turin oo marti gelineysa mid ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan Serie A caawa xilli Bianconeri ay…)
Horudhac: Tottenham vs Chelsea… (Lix xiddig oo muhiim ah oo ka maqan Spurs xilli Son shaki la gelinayo & N’Golo Kante oo…)
Kooxda Atletico Madrid oo markaan weerar ku ah Arsenal… (Waa kee xiddiga muhiimka ah ee ay doonayso inay ka soo qaadato?)
Haaruun January 19, 2020
(Madrid) 19 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay markaan weerar ku tahay Arsenal, waxaana ay doonaysaa inay ka soo qaadato weeraryahan muhiim u ah naadiga reer England.
Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Atletico Madrid ay indhaha ku hayso weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette oo ay doonayso inay soo qaadato haddii ay ku guul darreysato saxiixa Edinson Cavani oo ka tirsan Kooxda Paris Saint Germain.
Los Rojiblancos kooxda lagu naanayso ayaa sidoo kale ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo xiddiga Naadiga Borussia Dortmund ee Paco Alcacer, iyadoo 26-sano jirkaan la filayo inuu ku laabto dalka Spain.
Cavani ayaa weli ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda Atletico, laakiin waxay durbadiiba arkeen in laga soo diiday dalab ku kacayey 10 milyan oo euro oo dhiganta 9 milyan oo gini ama 11 milyan oo dollar oo ay dirtay Naadiga PSG.
Waxa ay Mundo Deportivo haatan warinaysaa in haddii Atletico ay ku guuldarreysato saxiixa Cavani ay markaa awooddeeda isugu geyn doono sidii ay Gunners uga soo qaadan lahayd weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette.
Paris Saint-Germain oo dooneysa inay soo qaadato mid ka mid ah macalimiinta ugu shidan Premier League
Liverpool iyo Chelsea oo ku tartamaya adeegga xiddig bar-tilmaameed u ah Real Madrid